साँढे ३३ किलो सुनकाण्ड : तोडिएला त राजनीतिक कनेक्सनको जालो ? – Mission Khabar
साँढे ३३ किलो सुनकाण्ड : तोडिएला त राजनीतिक कनेक्सनको जालो ?
मिसन खबर २३ जेष्ठ २०७५, बुधबार ११:३६
काठमाडौं, जेठ । अहिले नेपालमा सबैभन्दा बढी चर्चा पाएको बिषय हो, साँढे ३३ किलो सुन काण्ड । चर्चा नहोस पनि कसरी अहिलेसम्म यो काण्डमा ६३ जना जेलिएका छन् । यी मध्ये झण्डै आधा अभियुक्त पुर्पक्षका लागि जेल चलान भैसकेको अवस्था छ । तर मालिकको पहिचान गर्न र हराएको भनिएको सुन भेट्टाउन सरकार असफल रहदै आएको छ ।
हुनत, सरकारले गठन गरेको छानविन समितिले यहि समुहबाट ३८ क्विन्टल अबैध सुन निकासी पैठारी भएको ठहर गरेको छ । यसले यति ठूलो अबैध कारोबारमा ठूलाबडाको संलग्नता हुनसक्ने आशंका बढाएको छ । यसलाई कतिपय अनुसन्धान अधिकारी पनि नकार्न सकिरहेका छैनन । अनि अनुसन्धानको नेतृत्व गरिरहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा पनि जो कसैको संलग्नता होस, कारबाही नगरि नछाड्ने बताइरहेका छन् । गृहबाट यस्तो प्रतिबद्धता आउँदा पनि विश्वस्त भैहाल्ने आधार भने छैनन । यसअघि विभिन्न चरणमा भएका अनुसन्धान, मालिकसम्म पुग्ने भन्दै यत्तिकै सेलाएका थिए ।
अहिले अनुसन्धान र कारबाहीको गती केही रफ्तारमा भएपनि सबैको संलग्नता खुल्नेमा आशंका छ । गृहमन्त्री आफै भुरा माछा जालमा पर्ने क्रम जारी रहदा ठूला ‘माछा’ नजिक अनुसन्धान पुगेको बताइरहेका छन् । गृहमन्त्रीको बोली व्यवहारमा कार्यान्वयन होला त ? हुन त यो अनुसन्धानले उच्च प्रहरी अधिकारीको संलग्नता पुष्टिगर्दै कारबाहीको दायरासम्म ल्याइसकेको छ । दर्जनौँ अभियुक्त हिरासतमा पुग्दा कसैले पनि एकअर्काबिचको कनेक्सन खुलाएका छैनन । बरु हामी माध्यम मात्रै हौँ, लगानी बारे केही थाहा छैन भन्दै ठूलाबडाको बचाउ गरिरहेका छन् ।
गृहमन्त्री थापा भन्छन–‘माछा मार्ने क्रम जारी छ, भुरा र मझौला माछा समातिएका छन् । आशा गरौं ठूला माछा पर्न सक्छन् ।’ यो भनाइबाट पनि लख काट्न सकिन्छ । ठूलाबडा जालमा पर्ने संभावना निक्कै कम छ । केवल आशा मात्रै गरिरहेका छन् गृहमन्त्री पनि । पक्राउ गर्ने र पर्नेमा उनी कत्तिपनि ढुक्क छैनन । केवल जनचासोलाई सम्बोधन गर्ने काम भैरहेको छ । अनि, अनुसन्धानमा तानिएका अभियुक्तको वयानले पनि किटान गरेर ठूलालाई मुछेका छैनन ।
क्रमश: अनुसन्धान भैरहदा र व्यक्ति पक्राउ पर्ने हिरासत पुग्ने जारी रहँदा अन्य संलग्नताको मुटोको धड्कन भने पक्कै बढेको छ । उनीहरु जालमा परुन वा नपरुन मनोबैज्ञानिक दबाब भने झेलिरहेका छन् । अनुसन्धान जारी रहँदा यो घटना बारेको अड्कलबाजी सहि सावित नहुनपनि सक्छ । तर अहिले आम जनले गृहमन्त्रीको हिम्मतको तारिफ गरेका छन् । अनि गृहमन्त्रीबाट यो आशा पनि गरेका छन्, अबैद्य सुन काण्डको राजनीतिक कनेक्सन तोडिने छ ।